Hlukanisa ifayela elikhulu le-PST libe ngamafayela amancane - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Hlukanisa ifayili elikhulu le-PST libe elincane
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Repair ukuhlukanisa ifayela elikhulu libe elincane
Ngokukhula okushesha ngokwengeziwe kokuxhumana komuntu siqu nolwazi, ifayela le-Outlook PST, eliqukethe le datha, libuye likhule ngokumangazayo. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi sidinga ukuhlukanisa ifayela elikhulu le-PST libe lincane, nganoma yisiphi sezizathu ezilandelayo:
Usayizi omkhulu wefayela nenani elikhulu lezinto kuzoholela kusivinini esisheshayo emisebenzini eminingi, njengokucinga, ukuhambisa, njll., Ukuze uyihlukanise ibe izingcezu ezincane bese uthola ukuphathwa okulula nokusheshayo kuyo.
Izinhlobo ezindala ze-Outlook (97 kuya ku-2002) azisekeli amafayela amakhulu kuno-2GB, ngakho-ke uma ifayela lakho lifinyelela kulowo mkhawulo kepha usafuna ukulisebenzisa ngezinguqulo ezindala, lapho-ke okuwukuphela kwendlela ukuluhlukanisa lube izicucu ezincane.
Uma ukwazi ukufinyelela okuqukethwe yifayela elikhulu le-PST ku-Outlook yakho, ungasebenzisa I-Outlook yokuyihlukanisa ngesandla.
DataNumen Outlook Repair ingakusiza ukuhlukanisa ifayela elikhulu le-PST libe lincane.
Qaphela: Ngaphambi kokuhlukanisa ifayela elikhulu le-PST nge DataNumen Outlook Repair, sicela uvale i-Microsoft Outlook kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-PST.
Iya ku ithebhu, bese ukhetha inketho elandelayo:
bese usetha umkhawulo wosayizi kunani elingaphansi kuka-2GB. Kunconywa ukusebenzisa inani eliyingxenyana nje ye-2GB ukuze ifayela lakho lingaphinde lifinyelele ku-2GB futhi maduzane, ngokwesibonelo, i-1000MB. Sicela wazi ukuthi iyunithi iyi-MB.
Khetha ifayili le-Outlook PST elikhulu kakhulu njengefayela lomthombo le-PST elizolungiswa:
Ungafaka igama lefayela le-PST ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola ifayela le-PST elizocutshungulwa kukhompyutha yasendaweni.
Njengoba ifayela le-PST likhulu ngokweqile, kufanele libe ngefomethi ye-Outlook 97-2002. Ngakho-ke, sicela ucacise ifomethi yayo yefayela ku- "Outlook 97-2002" ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela ifayela lomthombo. Uma ushiya ifomethi njenge- “Auto Determined”, lapho-ke DataNumen Outlook Repair izoskena ifayili le-PST elingumthombo omkhulu ukunquma ifomethi yalo ngokuzenzakalela. Noma kunjalo, lokhu kuzothatha isikhathi esingeziwe.
Ngokuzenzakalelayo, nini DataNumen Outlook Repair iskena futhi ihlukanise ifayili elingaphezulu komthombo libe yizincanyana eziningana, ifayela lokuqala elihlukanisiwe eliqanjwe ngegama libizwa ngokuthi yi-xxxx_fixed.pst, elesibili ngu-xxxx_fixed_1.pst, elesithathu yi-xxxx_fixed_2.pst, njalonjalo, lapho i-xxxx igama le-xxxx ifayela le-PST lomthombo. Isibonelo, kufayela lomthombo le-PST i-Outlook.pst, ngokuzenzakalela, ifayili lokuqala elihlukanisiwe lizoba i-Optlook_fixed.pst, bese kuthi okwesibili kube yi-Outlook_fixed_1.pst, bese kuthi eyesithathu kube yi-Outlook_fixed_2.pst, njll.
Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela elihleliwe ngqo noma uchofoze ifayela le- ukubhekabheka bese ukhetha igama lefayela elingaguquki.
Ungakhetha ifomethi yefayela le-PST elihleliwe ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlelwa kwefayela elihleliwe, amafomethi akhona yi-Outlook 97-2002 ne-Outlook 2003-2010. Uma ushiya ifomethi njenge- “Auto Determined”, lapho-ke DataNumen Outlook Repair izokhiqiza ifayili le-PST elihleliwe elihambisana ne-Outlook efakwe kukhompyutha yendawo.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Outlook Repair intando starUkuskena ifayili lomthombo le-PST, ukuthola nokuqoqa izinto ezikulo, bese sifaka lezi zinto ezitholakele efayeleni le-PST elisha elinegama elisethwe ku-Isinyathelo 6. Sizosebenzisa i-Outlook_fixed.pst njengesibonelo.
Lapho usayizi we-Outlook_fixed.pst ufinyelela kusethi esinqunyelwe ku-Isinyathelo 2, DataNumen Outlook Repair izokwakha ifayela elisha lesibili le-PST elibizwa nge- Outlook_fixed_1.pst, bese uzama ukufaka izinto ezisele kulelo fayela.
Lapho ifayili lesibili lifinyelela kumkhawulo osethiwe futhi, DataNumen Outlook Repair izokwakha ifayela elisha lesithathu le-PST elibizwa nge-Outlook_fixed_2.pst ukuhlalisa izinto ezisele, njalo njalo.
Ngenkathi, ibha yokuqhubeka
izoqhubeka ngokufanele ukukhombisa inqubekela phambili yokuhlukanisa.
Ngemuva kwenqubo, uma ngabe ifayili le-PST elingumthombo omkhulu lihlukaniswe laba ngamafayela amasha amancane we-PST ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula amafayela e-PST ahlukanisiwe ngamunye nge-Microsoft Outlook. Futhi uzothola zonke izinto zefayela le-PST elingaphezulu ngokweqile zisatshalaliswe phakathi kwalawa mafayela ahlukanisiwe.
Qaphela: Uhlobo lwedemo luzobonisa ibhokisi lomlayezo elilandelayo ukukhombisa impumelelo yokwehlukanisa:
Kumafayili e-PST ahlukanisiwe, okuqukethwe kwemiyalezo nezinamathiselo kuzothathelwa indawo imininingwane yedemo. Ngiyacela oda okufushane umnyuziki ukuthola okuqukethwe uqobo.
Hlukanisa ifayili elikhulu le-PST libe elincane